July | 2018 | HimiloNetwork
Xirfadleyda Baroorta iyo Oohinta ka sameeya Goobaha Tacsida.
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 657 Views
Accra (Himilonetwork) – Dadka qaar waxaa ku adag inay ooyaan marka uu ka dhinto qofka ay jeclaayeen, balse baroorta iyo oohintu waa qeyb kamid ah tacsida laga dhigo dalka ku yaalla galbeedka Afrika ee Ghana. Layaabna malahan in dadka reer Ghana ay soo ijaartaan xirfadleyda baroorta markii ay geeri kaga dhacdo qof kamid ah qoyskooda. Ami Dokli waa mid kamid ...
Shiinaha – Qoyskii 11 Gabdhood isku dhalay iyaga oo rajaynaya Wiil.
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 204 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Sheekada lammaane ku nool gobalka Shanxi ee dalka Shiinaha kuwaas oo isku dhalay 11 gabdhood kaddibna joojiyay dhalmada markii ay ku gabagabeeyeen wiil ayaa dhawaan ku baahday baraha bulshada Shiinaha – taas oo lagu kala duwanaaday aragtideeda. Asalka sheekadan oo lagu daabacay wargeyska The Paper ayaa iftiimisay garab istaaga ay gabdhahani ka muujiyeen xafladdii arooska walaalkooda qura ee la dhashay. ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 221 Views
London (Himilonetwork) – 62-jirka lagu magacaabo Patrick Ryan wuxuu taniyo markii uu 14 jirsaday gal-bax ku ahaa xabsiga muddo 23 sannadood ah ilaa uu 50 jirsaday. Waxaana dhawaan haddana lagu riday xukun 18 bilood xabsi ah maadaama uu galay danbigii 668aad ee noloshiisa. Rikoorka danbiyada Ryan ayaa ah mid aad u badan oo xittaa booliska Accrington, Lancashire ay ku adkaatay inay ku ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 290 Views
Qaahira (Himilonetwork) – Xarun lagu xanaaneeyo duurjoogta oo ku taalla dalka Masar ayaa wajahaysa dhaleeceymo ku saabsan isku day qiyaano oo ay kula kaceen dalxiisayaal u yimid inay daawadaan duurjoogta kaddib markii ay dameer u ekeysiiyeen dameer farowga. Mahmoud A. Sarhani, oo soo booqday xarunta ayaa qaaday sawirrada dameer-farow ku jira xerada kaas oo uu aad ula yaabay muuqaalkiisa aan ...
Daawo – Biya-dhaca ugu dheer Adduunka ee gacan-ku-sameyska ah.
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 222 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waxaa jira biyo-dhacyo dhowr ah oo dabiici iyo gacan-ku-sameysba ah kuwaas oo dunida ku kala yaalla. Haddaba, biya-dhaca ugu dheer adduunka ee gacan-ku-sameyska ah wuxuu ku yaalla dalka Shiinaha. Waxaana lagu magacaaba Liebian Waterfall. Halkan haddaba ka daawo muuqaallo laga soo duubay.
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 527 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Garoon waa goob kulmisa noocyada kala duwan ee cayaaraha sida Kubadda cagta, koleyga, Dabaasha, gacanta, iyo kuwa la halmaala. Mararka qaar, waxaa lagu qabtaa ban-dhig faneedyada iyo ruwaayadaha, waa goob kor ka furan oo si afar gees ah u sameysan taasi oo leh meel ay fariistaan daawadayaasha ku sugan garoonka. Muqdisho Stadium waa mid ka mid ah ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 231 Views
Jeddah (Himilonetwork) – Waaxda Hubinta Daawada iyo Cunnooyinka Dalka Sucuudiga ee (SFDA) ayaa ku dhawaaqday qorshe u muuqda xaruntii ugu weyneyd ee soo saarta cunnooyinka iyo agabyada xalaasha ah. “Qorshuhu waa in sare loo dhigaa wax-soo-saarka xalaasha ah ee KSA si loogu baahiyo dunida Muslimka ah loona dhiirri-geliyo horumarinta dhaqaalahooda,” ayaa u dhignaa nuxur kasoo baxay Waaxda. Howl-fuliyaha guud ee ururka, Hisham ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 252 Views
Kuala Lampur (Himilonetwork) – Koox cilmi-baarayaal ah oo kamid ah Jaamacadda Islaamiga ah ee University Sains Islam Malaysia (USIM) waxay horumarinayaan software loogu sahlayo dadka dhagaha la’ inay ku bartaan Qur’anka. “Dadka aan inta badan helin nimcada maqalka ee dhagoollada ah waxay ku haraan aqoon la’aan,” ayuu yiri Norakyairee Mohd Raus, oo madax ka ah Ibnu Ummi Maktum (UMMI). Wuxuu intaas kusii daray ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 423 Views
Mogadishu (Himilonetwork) – After decades of chaos and civil war that led to failure to the horn of Africa’s country, Somalia is emerging as fragile nation and shaping its new face through the painful experience it had gone. Making the difference is the day-to-day focus. Rebuilding the entirely collapsed governmental institutions and standing the chance to gain its security maintenance, ...
Himilo July 29, 2018	Leave a comment 435 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Madaxdeena maskaxdooda ayaa notebook u ah! Marka ka daaya mashquulka ragaan dantooda ha wataane; inaguna marqaatiyaal baynu kanahay xalkaas! Anaguna ficilkeenu ha ahaado Fadhi-ku-dirir. Oraahdaasi waa mid kamid ah dhowr faallo oo laga bixiyay sawir muujinaya madax Soomaaliyeed oo la shirsan ergo ku suganeed shir caalami ah oo lagu qabtay dalka Belgium-ka. Mid kale ayaa kusoo aragti ...
UNHCR: Ma fududa dib-u-celinta qaxootiga